अग्नियुद्ध | मझेरी डट कम
kbs — Sun, 08/15/2010 - 08:40
'राजालाई नजिस्क्याउनू, आगोलाई नखेलाउनू ।' बाले भन्नुभएको यो कुरो ऊ अहिले पनि झलझली सम्झन्छ । हिउँदको घुर ताप्दा उनीहरू घुरको आगो चलाउँथे, कहिले घुर फुक्थे, कहिले घुर खोस्रन्थे, कहिले घुर सल्काउँथे त कहिले घुर छोप्थे । उनीहरूका त्यस्ता क्रियाकलापलाई बा गौड गरेर हेरिरहुनहुन्थ्यो र काममा अलिकति तलबितल पर्‍यो कि उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, "आगोसँग होस् गर्नु । होस् पुगेन भने आगोले खान्छ । आगोसँग खेल्ने त मोहन हो मोहन ! पटक्कै नडराउने, न राजासँग, न आगोसँग ।"
"को मोहन, बा ?" सोधेथ्यो उसले । "तिमी चिन्दैनौँ, भैगो । तिमी आफ्नो काम गर । स्कुलको पाठ गरिसक्यौ ?" के सोचेर हो, बाले टार्नु भएको थियो । ऊ किशोरवयी थियो तिनताक । स्कुलमा एकजना शिक्षक हुनुहुन्थ्यो- मोहन सर । उसलाई लाग्यो, बाले तिनैको कुरा गर्नुभएको होला तर उहाँ त राजालाई विष्णुको अवतार मान्नुहुन्थ्यो र आगोदेखि अचाक्ली डराउनुहुन्थ्यो । आगोले पोलेर उहाँको अनुहारै विरूप भएको थियो । सामाजिक शिक्षा पढाउनुहुन्थ्यो । एक दिन पढाउनु भयोः पहिले-पहिलेका मानिसहरू जङ्गलमा बस्थे, शिकार गर्थे, काँचै मासु खान्थे, काँचा जङ्गली फलफूल खान्थे । आगो पार्न जानेपछि मान्छेको जीवनशैलीमा ठूलो परिवर्तन आयो । खानेकुरा पोलेर, पकाएर खान थाले, आगो तापेर न्यानो भएर बस्न थाले । आगो बालेर सुरक्षित भएर बस्न थाल्यो । आगोले मान्छेलाई नयाँ र सुरक्षित जीवन दियो । तर होस् पुर्‍याएन भने, हेर मेरो गति । 'त्यसैले अग्निदेवो भव ः ।'
घरमा होम लाउँदा पण्डितबाजेले भन्नुभएको थियो- महषिर् अङ्गीरसले आगो पार्ने विद्या आफ्ना शिष्यहरूलाई सिकाएका थिए । पछि उसले थाहा पायो-पहिलेको युनानमा प्रमिथस भन्ने वीरले स्वर्गबाट आगो चोरेर ल्याएर धरतीका दुःखी मान्छेहरूलाई दिएका थिए र धरतीका दुःखी मान्छेहरू खुसी भएका थिए । आगोले त प्राणीलाई जीवन दिँदोरहेछ-सुखी जीवन, स्वर्ग दिँदोरहेछ । त्यसैले त प्रमिथसले स्वर्गबाट आगो चोरेर लुकाएर ल्याएका रहेछन् । उसलाई लाग्यो-मोहन यहाँका प्रमिथस हुन्, मोहन आजका अङ्गीरस हुन् । कहाँ छन् त ती मोहन ? मोहनको कुरा गर्ने बा बितेको धेरै भइसकेको थियो । आगाकै चितामा उसले बालाई सेलाएको थियो, भष्मीभूत पारेको थियो र अस्तु घातमै पानीमुनि बालुवामा पुरिदिएको थियो,'भष्मीभूतस्य देहस्य पूनरागमनम् कुतः ?' चार्बाकी उक्ति स्मरण गर्दै । बाको अवसानपछि काँधमा बोक्नु परेको बाको जिम्मेवारीका क्रममा जीवन र परिवेश उसलाई रौरव नर्कझैँ लाग्न थालेथ्यो । त्यसैले ऊ झलझली मोहनलाई सम्झन थालेथ्यो । प्रमिथस मोहन, अङ्गीरस मोहन, मोहन-मोहन । ती मोहनलाई एकपटक मात्रै भएनि भेट्ने अभिलाषा उसमा तीव्रतर हुँदै गयो । भेट्न नपाए नि नजिकैबाट एक नजर हेर्न मात्रै पाए नि हुन्थ्यो जस्तो लाग्न थाल्यो उसलाई । ती कहाँ छन् भन्ने कुरो कसलाई थाहा होला ? मोहन सरलाई त केही न केही थाहा होला भन्ठानेर ऊ मोहन गुरुकहाँ गयो र आफ्नो जिज्ञासा बिसायो । सुन्नासाथ पहिले त गुरुले उसलाई तलदेखि माथिसम्म हेरे- दुई/तीन चोटि । उसलाई आफ्नो जिज्ञासामा अटल देखेपछि आफ्नो तुकबन्दी शैलीमा भने, "बाबु कमल, तिमी हिलोपानीमा खाइखेली गर्नेलाई आगोसँग रमाउनेको सङ्गति नजँच्ला । त्यसै पनि आगो र पानीको बैर त उहिल्यैदेखि हो नि ।"
"आगो र पानीको मित्रता पनि त हुन सक्छ नि, गुरु । आगो र पानीलाई सार्थक ढङ्गले प्रयोग गरियो भने त यही धरतीलाई स्वर्ग बनाउन सकिहालिन्छ नि । आगो र पानीलाई ठीक ढङ्गले प्रयोग गरेरै हामी जङ्गली जीवनको कोकुनबाट निस्केर यहाँसम्म आइपुगेका होइनौँ र । त्यसैले मलाई ती मोहनका बारेमा केही बताइदिनुस् न ।" कमलले आग्रह गर्‍यो, "तिनलाई एक खेप नभेटी भा'छैन ।"
अनेक किसिमले टारटुर गर्दा पनि कमलको हठ कायमै रहेपछि मोहन गुरुले यताउति पल्याकपुलुक हेर्दै उसलाई आगो नबलेको एकान्तको अगेनोको छेउमा बसाए । आफू पनि बसे अनि निभेको ठुटो अगुल्टोले अगेनो खोसि्रदै साउतीको स्वरमा भने, "ती त भर्भराउँदा आगा हुन् । तिनको थाप्लोमा करोडको थैली थोपरेको छ राज्यले । जिउँदो ल्याए एक करोड । मूर्दा ल्याए दुई करोड, टाउको ल्याए डेढ करोड ।" "के बिराम गरे र तिनले, गुरु ?" कञ्चट कन्याउँदै कमलले मलुवा स्वरमा सोध्यो ।
"विराम त के गरे भन्नु नि । आगो बाँड्दै हिँडे, आगो ! कमारालाई मालिकको दासताबाट मुक्ति, कमकरलाई राज्यको शासनमा उकाल्ने, श्रमजीवी वर्गको हातमा सत्ता नआएसम्म धरतीको फोहोरमैला सफा हुन सक्दैन, रौरव नर्क नै रहन्छ, अधिकारविहीनहरूलाई अधिकारको मालिक बनाउनुपर्छ आदि यस्तैयस्तै कुरा गर्छन् । त्यहीँदेखि तिनको खेदो गर्‍या गर्‍यै छ राज्यले । ती सुनौलो सपना बाँड्दै हिँडेछन् । राज्य त्यो सपना खोस्दै हिँड्छ । यस्तै लुकामारी छ तिनको । भुँड्काभरि आगो बोकेर हिँड्याछन्, कहिले आगो छर्छन्, कहिले आगो लुकाउँछन् ।" अगेनो खोस्रँदै भने गुरुले ।
"कहिलेदेखि बाँडेका हुन् आगो ?"
"मैले थाहा पाएदेखि ती आगो बाँड्याबाँड्यै छन् । न त ती आगो बाँडेेर थाक्छन्, न त आगो कहिल्यै सकिन्छ ।"
"त्यो आगोको स्रोत के हो त ?"
"प्रकृति, विभेदकारी समाज अनि यी दुईसँग चिनारी गराउने पुस्तक ।"
"के उमेरका होलान् ती, गुरु ?"
"उमेर ? हेर बाबू, आइमाईको र योद्धाको उमेर कहिल्यै नसोध्नु । युवती जहिले नि तरुनी हुन्छे र योद्धा जहिले नि जवान रहन्छ ।"
"ती बस्छन् कहाँ ?"
"ती यहाँ बस्छन् भन्ने भा भए शक्तिको मालिक बनेको राज्यले तिनको थाप्लोमा थैली थोपर्ने नै थिएन । ती त यात्री हुन् यात्री अग्निपथका .....चरैवति चरैवति
......हिँडिरहन्छन्, आज यहाँ भोलि वहाँ । चल जोगी फटकार छाला जहाँ पुग्ला त्यहीँ बस्ला भनेझैँ । तिनको आफ्नो भन्ने कोही छैनन् जनताबाहेक, सम्पत्ति भन्नु केही छैन, त्यही आगोबाहेक ।"
"यो सब कष्टकहर किन काट्दैछन् त गुरु ?" कमल झन् कौतूकमय बन्दो थियो ।
"सबै कुरो आजै जानिहाल्ने ? धेरै भोकाए जस्ता छौं । भन त......युवराज गौतमलाई के कुराको कमी थियो कपिलवस्तु दरबारमा ? तर उनी सबै दरबारी सुखसयल, मायामोह त्याग गरेर निस्के समाजको दुःखको कारण खोज्न, सत्य खोज्न । सुकरातले सत्यकै लागि हाँसीखुसी विषमान गरे । गङ्गालाल किन चढे फाँसीमा ? टङ्कप्रसाद किन राजी भए चारपाटा मुडिन ? यज्ञबहादुर थापा र भीमबहादुर श्रेष्ठ किन राजी भए छातीमा तातो गोली थाप्न ? कवि कृष्णसेन इच्छुक किन राजी भए मृत्युवरण गर्न ? एउटा अभीष्टका लागि, एउटा सत्यको प्राप्तिका लागि । मोहन पनि त्यहीँ अभीष्टका लागि लागिपरेका छन् । यिनीहरू मान्छेको कोटीभन्दा धेरैमाथि उठेका मान्छे हुन् । यिनीहरू समाजका अगुवा हुन्, सम्मान र श्रद्धाका पात्र हुन् । म त आगोले पोलेको मान्छे बिजुली देख्दा नि तर्सन्छु तर मोहनबाबु भनेपछि चाहिँ शिर सम्मानमा नुहुन्छ । तिमीहरू त लक्का जवान छौ, खोज, भेट, आफ्नो जिज्ञासा बिसाऊ, छलफल गर, बादेवादे जायते तत्वबोध । ती त अग्निपथका यात्रु हुन् । जहाँ आगो छ त्यहाँ ती हुन्छन् नै तिनलाई चिन्न सक्ने विवेक चाहिन्छ । लौ त कमलबाबु, अहिले बेर भो मलाई, स्कुल जानुपर्छ ।"
"हवस् त....." भन्दै कमल पनि बिदा भएर घर आयो ।
देखभेटै नभइकन आगो बाँड्ने मोहन झन्झन् उसको मनमस्तिष्कभित्र पस्दै गए, तिलस्मी तालले । सपनाजपना उसको मथिङ्गलमा मोहन नै नाच्न थाले, आगो बोक्ने मोहन, आगो बाँड्ने मोहन । कसैले भने, "मोहन गरिबबस्तीमा छन् ।" ऊ त्यहीँ पुग्थ्यो तर मोहन त्यहाँबाट सुकुम्बासी बस्तीतिर हिँडिसकेका हुन्थे । गरिब र सुकुम्बासीका पीडाव्यथा देखेर ऊ भावुक बन्थ्यो र मोहनलाई खोज्दै ऊ पिछडिएका वर्गकहाँ पुग्थ्यो । त्यहाँबाट मजदुरकाँ अनि किसानकाँ, बुद्धिजीवीकाँ । यसरी मरिचिकामा मृग भौँतारिएझैँ ऊ, मोहनको खोजीमा भौँतारिइरहन्थ्यो । एकदिन त उसकी श्रीमती कौशिकीले भनिन् पनि, "रातोदिन मोहनजीलाई खोज्दाखोज्दा अब त हजुर नै मोहन भइसक्नु भयो जस्तो लाग्छ ।"
तर उसको खोजाइ व्यर्थ भएन, भेट्यो नै उसले मोहनलाई, मजदुरबस्तीमा । पहिले त यसलाई पत्यारै भएन, सबै उस्तै थिए तर उसले अनुमान गरेका ती व्यक्ति मोहन नै रहेछन् । फुकीढल प्राणी, शिशुपाल तर अनुहारमा कान्ति, आँखामा तेज, बोलीमा चास्नी घोलिएझैँ मिठास । एकछिनसम्म त ऊ हेर्‍याहेर्‍यै भयो मोहनलाई अनि सम्हालिँदै नमस्कार गर्‍यो ।
"नमस्कार होइन, मन पो मिलाउनुपर्छ, विचार मिलाउनुपर्छ ।" भन्दै उनले पहिले हात मिलाए अनि अङ्कमाल गरे ।
कस्तो तातो हात ! शरीर पनि धपक्क बलिरहेको जस्तो तातो र रापिलो । अँध्यारोमा झलल्ल उज्यालो छर्ने हँसौटे बुद्धको मूर्तिजस्तो, अधरमा हाँसो खेलिरहने हरघडी ।
"मित्र, यो भ्रष्ट सत्ताले तपाइर्ंको मनमस्तिष्कलाई थङ्थिलो पारेको रहेछ, बरा.....।" उनले उसलाई कुममा सुमसुमाउँदै भने, "यो सत्ताको चरित्रै यस्तै हो यसले त आहत र व्याकुल जनतालाई मरिचिका बाँड्छ । त्यहीँ मरिचिकाको भ्रममा पुस्तौँपुस्ता हामी भ्रमित भइरहेका छौं र यो सत्ता चिरञ्जीवी बनिरहेको छ तर अब यो लम्बिन पाउँदैन । यसको ध्वंश निश्चित प्रायः छ ।" आक्रोशित थिए उनी, आँखा अहिले नै बलिहाल्छन् कि जस्तो लाग्थ्यो । भुँड्काबाट आगोका फिलिङ्गाका झिल्काहरू निस्केर यताउति उडिरहन्थ्यो । देख्दादेख्दै पारिपट्टकिो कपडा कारखानाको गोदामको कपासको गाँठमा सल्केछ, हृवार्हृवारती बलिगयो । दौडादौड गर्दै उनीहरू त्यहाँ पुगे र आगो निभाउन थाले तर अनेक प्रयत्न गर्दा पनि आगो नियन्त्रणमा आएन । मोहन पनि आए । उनले बलिरहेको आगो गौड गरेर हेरे । त्यसपछि भुँडकाहरूको आगो हेरे नियालेर अनि एउटा भुँडकाबाट दुई चार फिलिङ्गाहरू झिकेर बलिरहेको आगोमा हुर्याए । के अचम्म ! हृवारहृवार्ती दन्किरहेको आगो त सट्याकसुटुक समेटिएर त्यही भुँडकामा पो प्रवेश गर्‍यो । पत्याउँनै नसकिने दृश्य ! धार्मिक फिलिम र टेलिशृङ्खलामा शक्तिशाली दैवी पात्रहरूले गर्ने जस्तो दृश्य पो देखियो । 'विज्ञानको अत्याधुनिक विकासले धेरै असंभवलाई संभव बनाइदिएको छ ।' भन्दै अनाहक नोक्सान भएकोमा थकथक माने मोहनले । सँगैका साथी आक्रोशित थिए ।
"हामीलाई बदनाम गराउने षड्यन्त्र हो यो । अग्निमा घुसपैठ भएको हुनुपर्छ ।" उनीसँगैको उनीजस्तै देखिनेले गम्भीर मुद्रामा भन्यो । "षड्यन्त्रकारी हामीभित्रै हुनुपर्छ ।"
"साथी, होस् पुर्‍याइएन भने त यो आगोले यै अनमोल ज्यानलाई खाने र'छ । यस्तो धपक्क बलेको छ ज्यान ।" कमलले गम्दारी पारामा चिन्ता जाहेर गर्दै भन्यो ।
मोहनलाई यस्तो सुझाव रुचिकर लागेनछ क्यारे ! उनले उसलाई आँखा तरेजस्तोगरी हेरे । उनका साथमा रहेकाहरूले पनि उसलाई नरुचाएजस्तो गरी हेरे । कमलले उनीहरूको भङ्गीमा तुरून्तै बुझिहाल्यो । उसलाई लाग्यो-'प्रशस्तीमात्र सुन्ने आत्मक्षयी बानीले यिनीहरू पनि ग्रसित रहेछन् । यसको समुचित निदान गर्नैपर्छ, नत्रभने यो आगोले स्वर्गको हैन नर्कको बाटो डोर्‍याउँछ ।' त्यसैले आफूलाई सम्हाल्दै प्रकटमा भन्यो, "बडो यत्नसाथ बडो होस पुर्‍याएर ठूलो जोखिम मोलेर हामी जनताको हितका लागि जगत्को हितका लागि अनेक कष्टकहर खपेर कष्टमय यस अग्निपथको यात्रामा हजुरहरू यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ । यो हाम्रा लागि कम्ता गौरवको कुरो होइन । अब यस यात्रालाई परिणाममुखी बनाउन हजुरहरूको सजगता, सक्रियता र जिम्मेवारीयुक्त भूमिकाको खाँचो छ । जनतालाई उज्यालोतिर डोर्‍याउने यो काम हजुरहरू बाहेक अरूले गरोइनन् । जनताले हजुरहरूबाट ठूलो आशा/अपेक्षा राखेका छन् ।"
"हो, यो आगोको जोहोको बडो कष्टप्रद कथा छ । कहिले यसलाई लुकाएर जोगाइयो त कहिले सल्काएर बढाइयो र यात्रामा यहाँसम्म आइपुगियो । अहिले यसलाई सक्दो बाँड्ने र खर्च गर्ने बेला छ, जनजनका मनमनमा पुर्‍याउने बेला छ । जनताले अपार माया, प्रेम र स्नेह दिएर जोगाएको, बढाएको आगो हो र यो अहिले जनताकै पोल्टामा लडिबुडी गर्दै गन्तव्यतिर लम्किरहेछ ।" मोहनले गर्वोन्मत्त मुद्रामा भने ।
"तर यसको रूपगुण नबुझेकाहरूको पोल्टामा पर्‍यो भने यसले आफूलाई मात्रै होइन जगतै ध्वस्त पार्छ नि ! कति पीडादायी हुन्छ आगोले निम्त्याएको विनाशलीला !" कमल अझ पनि चिन्तातुर देखियो । "त्यस्तो किमार्थ हुनेछैन, मित्र । अब हामी लक्ष्यको निकटस्थ हुँदैछौँ ।" मोहनको स्वरलहरीमा अदम्य विश्वास भरिएको थियो ।
"सार्थ, अग्नियुद्धपछिको धरती त झलल्ल उज्यालो होला हगि । अनि त आगो बाँड्ने काम पनि रहँदैन, आगो बाँड्ने मान्छे पनि होबोइनन् होला ।" कमलले आगतको परिकल्पनामय जिज्ञासा बिसायो ।
"यो जगत् झलल्ल उज्यालो पार्नका लागि नै अग्नियुद्ध गर्नुपरेको हो । यस युद्धमा नराम्रा कुरा नष्ट हुनेछन् र राम्रा कुरा देखिनेछन् तर आजको भोलि नै त्यस्तो भइहाल्दैन मित्र । त्यसले समय लिन्छ । फुलबाट चल्ला कोरल्न पनि त पोथीले खास समय र अवस्थाबाट गुज्रनु पर्दछ । बस, त्यस्तै हो यो परिवर्तन पनि । अनि अग्नियुद्धपछि प्राप्त हुने झलमल्ल उज्यालोको रक्षाका लागि पनि अग्नियुद्ध जारी राख्नुपर्छ । त्यसैले यो अग्नियुद्ध पनि सतत् युद्ध हो, अन्त्यहीन युद्ध ।
त्यसैले आउनुस्, यो महान् र पवित्र अभियानमा सहभागी बन्नुस् ।" अधरमा स्निग्ध मुस्कान खेलाउँदै मोहनले भने ।
"सार्थ, मानिस त मरणशील प्राणी हो । उसको अन्त्य निश्चित छ भने सार्थको निवृत्तनपछि आगो बाँड्ने काम अनि अग्नियुद्धलाई निरन्तरता दिने काम त....।" कमलको जिज्ञासा अझ निख्रेको थिएन ।
"होइन.....होइन.....त्यसो होइन । मोहन त अमर-अजर छन् । म मरुँला, ऊ मर्ला तर पनि मोहन मर्दैनन् । जनताले अर्को मोहन खडा गरिछाड्छन् । तिनै मोहनले आगोको यो भुँडको बोक्नेछन् र उत्तराधिकारी ग्रहण गर्नेछन् । धरतीमा, प्रकृतिमा विवेकशील मान्छे रहेसम्म यसको अन्त्य हुँदेन नै ।" भर्भराउँदो आगोको भट्टीमा खारिएको आत्मविश्वासपूर्ण स्वरमा मोहन बोलेथे ।
"अर्थात् सतत् अग्नियुद्ध !" भन्दै अतिरेक खुसीमा धपक्क बजेजस्ता मोहनसँग कमल आलिङ्गनबद्ध भयो ।
- पुष्पनगर, बानेश्वर, काठमाडौँ ।